Wararka - 2019 FIC Shiinaha Ku Darsiga Cunnada Caalamiga ah iyo Bandhigga Waxyaabaha Ay Ka Kooban Yihiin
Bishii Maarso 18-20, 2019 FIC Shiinaha Cunto Caalami ah iyo Carwooyin Carwooyin ah ayaa lagu qabtay magaalada Shanghai, Shiinaha. Global Ocean ayaa ka soo qayb gashay bandhigga.
Maaddaama ay tahay soo saare xirfadle hydrocolloids ah oo ku sugan Shiinaha oo in ka badan 20 sano ah, Global Ocean waxay ku tiirsan tahay tiknoolajiyaddeeda horumarsan ee casriga ah iyo tiknoolajiyadda soo saarista oo la hagaajiyay si ay u soo saarto wax soo saar kasta oo tayo sare leh; waxyaabahayaga waawayn waa agar darajooyinka cuntada, agar bakteeriyoolaji ah, agar dag dag ah, carrageenan, agaro-oligosaccharide iyo wax soosaarkooda iskudarka, wadarta guud ee waxsoosaarka sanadlaha ah wuxuu awoodaa ilaa 3000 tan. Waxyaabahayagu waxay idman yihiin ISO, HALAL iyo KOSHER, sidoo kale waxay la kulmi karaan heerarka qaranka Shiinaha iyo heerarka EU, oo si fiican loogu iibiyay Shiinaha oo dhan loona dhoofiyey gobollada Koonfur-bari Aasiya, Yurub iyo Ameerika, iwm.
Goobta: Shanghai, Shiinaha
Waqtiga: 18 - 20 Maarso, 2019
Booth Lambarka: 52220 / 52G21
Waxyaabaha ay ka kooban tahay Cuntada Shiinaha waa dhacdo saameyn ku leh isla markaana isku dhafan oo loogu talagalay waxyaabaha lagu daro cuntada iyo warshadaha ku jira Aasiya. Waxay ka soo wareegtay 26 sano in munaasabadan sanad walba laga abaabulo Shiinaha. Shirkadaha hormoodka ka ah warshadaha ayaa kaqeyb gala dhacdadan, iyagoo soo jiidanaya tobanaan kun oo soo booqdeyaal xirfadlayaal ah. Sannad kasta, tirada kaqeybgalayaasha ayaa sii kordheysa. FIC 2019 waxaa loo qorsheeyay laga bilaabo "18 Maarso ilaa 20 Maarso, 2019", Xarunta Bandhigga Qaranka iyo Shirarka (Shanghai), Shiinaha. Marka laga reebo bandhigyada iyo adeegyadii ugu dambeeyay, martida iyo sidoo kale soo bandhigayaashu waxay kaqeyb qaadan karaan muxaadarooyin taxane ah, aqoon isweydaarsiyo farsamo, madasha shirarka iyo golaha aqoonyahannada. Dhacdooyinkan kor u qaadista aqoonta, kaqeybgalayaashu waxay ka heli karaan sawir cad oo ku saabsan isbeddelka horumarinta warshadaha cuntada, horumarka, xaaladda hadda jirta, hal-abuurnimada, isbeddelka cunnada, xeerarka iyo heerarka, iyo horumarinta cunnada lagu daro.
Labadaba, alaab-qeybiyeyaasha iyo iibsadayaasha ka imanaya suuqyada gudaha iyo dibaddaba waxay diyaar u yihiin inay la kulmaan taxane ah alaabooyin cusub iyo dhacdooyin daahfurka tikniyoolajiyadda, iyo siminaaro isdaba-joog ah iyo goleyaal, oo aanad waligaa hore u arag.
Waqtiga boostada: Sep-08-2020